Ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị ọnụ n'ụwa | Njem akụkọ
Mariela Carril | 28/04/2022 17:00 | Emelitere ka 30/04/2022 01:29 | Gastronomy, Ibiza
Ebe mara mma na-amasị m mana enweghị m nnukwu ego, yabụ na m ga-ekpebi ịhụ ha na TV ma ọ bụ na magazin. M na-ekwu mgbe niile na ọ bụrụ na m nwere nnukwu ego, m ga-eji ya na-aga na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị ahụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ maka nde mmadụ, ọ bụghị maka ọrụ ma maka ebe, ahụmahụ na ụtọ ha na-enye.
Na-ekwu maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Kedu ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha ọnụ n'ụwa? Ọfọn, ọ na-adịgasị iche site n'oge ruo n'oge, ma ọ dị ka taa ọ bụ a Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Spanish ihe dị Ibiza: aka Sublimation.
Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ego, ị nwere ike ịga na-anụ ụtọ ọrụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ a nke dị na Ibiza, Spain. A malitere ya na 2014 na bụ echiche okike nke Paco Romero, n'okpuru ụzọ nke culinary na mba. ezuola ikwu na o nwere 3 Repsol soles na kpakpando Michelin abụọ. Ọ dịghị ihe ọjọọ.
Ihe ụlọ oriri na ọṅụṅụ a na-enye karịrị efere, ọ bụ ihe niile ahụmahụ culinary kedu ebe i mara jikọta teknụzụ, gastronomy na ihe ngosi. Ihe niile ọnụ, ma o doro anya na, nri bụ nke kasị mma n'ihi na n'azụ ya bụ ndị isi nri Dani García, Toño Perez, Diego Guerrero na David Chang na onye isi nri pastry Paco Torreblanca.
Nke bụ eziokwu bụ na n'ụwa ebe ọ bụ mgbe niile banyere ime mgbanwe, echiche nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ ịga otu nzọụkwụ n'ihu na gastronomy na ọ bụghị nanị na-enye nri, larịị na mfe, ma ahụmahụ. N'oge a, n'akụkụ niile, ọ dị ka ihe a ga-eme bụ inye ọ bụghị ọrụ kama ahụmahụ nke na-emikpu dị ka o kwere mee.
Ya mere, e nwere nri, e nwere ndị na-emepụta ihe, e nwere illusionists, e nwere technicians, set-emepụta, egwú, scriptwriters na ọtụtụ ndị ọzọ. A na-ahazi ihe ngosi n'ezie gburugburu ndị na-eri nri, nke ndị àgwà ha na nkà ha na-ahụ mgbe nile na Hollywood ma ọ bụ Broadway.
na sublimation enwere naanị mmadụ iri na abụọ nke a na-anabataghị na tebụl dị iche iche kama na otu. Nri na ndị ọbịa bụ protagonists na site na mgbe ị na-anọdụ ala na tebụl ihe ngosi na-amalite. Ihe ngosi nke nwere, n'ogo elu nke saịtị ahụ, teknụzụ ọgbara ọhụrụ iji mee ka ọ bụrụ ihe a na-agaghị echefu echefu n'ezie. Oleekwa nkà na ụzụ anyị na-ekwu? Nke emepụta eziokwu...
Echiche bụ na onye na-eri nri nwere ike njem na-ahapụghị oche, gbanwee oghere, ya na a egwuregwu nke onyonyo, ọkụ, amụma dị iche iche na egwu. Ma ka ọ dị ugbu a, nwee obi ụtọ na menu nke nwere ọtụtụ efere pụrụ iche. Menu, n'aka nke ya, mejupụtara efere iri na anọ, ihe ọṅụṅụ na desserts abụọ. Otu otu, na njem na-aga n'ihu ruo ọgwụgwụ.
Nri na-amalite na mmanya mmanya, whiskey dị oke ọnụ nke nwere ike na-eri otu karama euro 240. O zuru ezu ikwu na ọ bụ aka mere nakwa na o nwere ọtụtụ ihe na-esi ísì ụtọ nakwa na ị gaghị eme ka ọnụ ọnụ gị na imi gị kụrie ya n’ihi na ọ bụ ihe kacha akwọ mụrụmụrụ, na-atọ ụtọ ma dịkwa ụtọ n’ụwa. Ma n'ụzọ doro anya, ọ bụghị na ha na-ejere ya ozi nanị ma nke ahụ bụ nnukwu mmalite.
Nchịkọta nhọrọ anaghị adị mgbe niile, ma n'ezie ị ga-ahụ ọtụtụ onye na-emepụta oké osimiri, ọmụmaatụ oporo pickled, mọsel, agụba clams ma ọ bụ akịrịkọ. Mgbe menu gụnyere azụ na shellfish Ụlọ ahụ dum na-aghọ oké osimiri na omimi ya. Ìhè, agba...
Mgbe ahụ gbanwee ọnọdụ ahụ o nwere ike ịbụ na ị chọtara onwe gị na njupụta nke oke ọhịa na-eri mushrooms na herbs ma ọ bụ n'obodo Ịtali, na egwu sitere na nna nna, na-atọ ụtọ ubi inine. Mgbe emechara atụgharị ga-abịa augmented eziokwu iko. Yabụ, anyị na-abanye n'ụzọ zuru ezu n'ime eziokwu mebere nke na-enye gị ozi mgwa ihe nke ihe ị ga-eri na nhazi nke nkwadebe gụnyere na vidiyo.
Ị pụrụ ọbụna iche nke ahụ? Ọ bụghị onye na-agba ọsọ Blade? Ma mgbe ị chere na ị nọ na narị afọ nke XNUMX o nwere ike ịbụ na ị pụtara na mberede n'ụgbọ okporo ígwè mara mma na efere na tebụl gị dị nnọọ iche. Ọnụ ọnụ na anya anaghị akwụsị ịhụ ihe ịtụnanya.
Enwere ohere maka ihe ngosi ma ọ bụ ihe nkiri? Ọzọkwa, ma ngwaahịa ndị a na-ere ere bụ efere, na ụtọ, ọ dịghị ihe ọ bụla ị nụtụrụla. Ị chere nke ahụ Anụ Mmịkpọ ọ bụ nkịtị? Ee, mana na nke a egwu na egwu na-eso ya, na, n'ụzọ dị ịtụnanya, whiskey na-apụta ọzọ mana ọ na-enwe ụtọ ọzọ, na-ese anwụrụ, nke a na-emeghachi na ihendori BBQ. Cheta na ebe a, ihe ọṅụṅụ bụ ezigbo pairing na nri e nyere, Ya mere, ndị isi nri echewo ihe niile. Nri ọ bụla nwere ụzọ ya na ihe ọṅụṅụ na nke ọzọ.
N'ikpeazụ, desserts nke na-abata na onye isi nri ọ bụla na-akwadebe ya ebe ahụ, n'akụkụ ya. Ọ nwere ike ịbụ sponge yogọt, ude butter, mousseline oroma... Ihe eji megharịa ọnụ nke abụọ na-eweta aka chocolate n'aka ya na whiskey ọhụrụ nke, ọ bụghị ịgbanwe, dị oke ọnụ. Ọ bụ na iko ma na-eji megharịa ọnụ n'onwe ya, imbibing achicha na osisi ekpomeekpo.
Agaghị m ama ma efere ndị ahụ bara ụba, enwere m obi abụọ, mana ebe a ị na-akwụ ihe dị iche iche. Ego ole ka a na-akwụkwa? Ihe dị ka euro 2000 kwa nri abalị. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọtụtụ, ọ bụghị ihe ọjọọ ma ọlị na-atụle na anyị na-ekwu banyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Ibiza ebe ihe ọṅụṅụ nwere ike ịdị n'etiti 250 na 600 euro ma ọ bụrụ na ọ bụ nke ọma ika. Ọnụ ụzọ Pacha, ihe atụ ọzọ, dị gburugburu 500 euro kwa onye, ​​yabụ ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ọnụahịa, Sublimotion esiteghị na mbara ala ọzọ.
Ihe kacha mma bụ na onye ọ bụla nwere euro n'akpa ha nwere ike ịkwụ ụgwọ ma nọrọ n'etiti ndị na-eri nri iri na abụọ ahụ. Ya mere, ọ bụla chioma otu n'ime ụmụ klas gị nwere ike ịbụ onye ama amad, onye ma? Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị dị njikere ime kwụọ ihe dị ka euro 1600 Ị ga-ebi ndụ dị ukwuu ahụmahụ, ekpomeekpo, show, ọrụ, ihe niile dị nnọọ mma na-agaghị echefu echefu. N'okwu abụọ: nka nka.
Enwere ndị nkịtị dị njikere ịkwụ ụgwọ ahụ maka nri abalị? N'ezie, enwere ndị dị njikere ịkwụ ụgwọ dị ukwuu maka tiketi iji hụ asọmpi iko mba ụwa. Ma ọ bụ ọ bụghị? Ọ dị ka ndị na-eri nri na-ahapụ Sublimotion nnukwu afọ ojuju, yabụ ọ bụrụ na-amasị gị ahụmịhe karịa ịzụrụ ihe, ị nwere ike iche echiche itinye ego na abalị agaghị echefu echefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ibiza » ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha ọnụ n'ụwa